OROMIA (Ibsa ABO) Qabsoo Bilisummaa Oromoo Rarraga Bilisummaa Dhaqqabee Jiru Xumura Itti Gochuun Dirqama Oromoo Maraa Ti | Fighting for Freedom and Equality
OROMIA (Ibsa ABO) Qabsoo Bilisummaa Oromoo Rarraga Bilisummaa Dhaqqabee Jiru Xumura Itti Gochuun Dirqama Oromoo Maraa Ti
Posted by Gishe Abdi Wako on October 7, 2016
Date: October 7, 2016Author: oromsiis0 Comments
Onkoloolessa 07,2016 Ummatni Oromoo, miseensotni ABO fi WBO, Qeerroon Bilisummaa Oromoo mirga ummata Oromoof jecha wareega olaanaa baasaa turan, baasaas jiran. Baatiilee 11 dabraniif ammoo addatti Qeerroon Bilisummaa fakkii tahuun dungoo tahee qabsoo fuula dura furgaasuu keessatti dalagaa boonsaa fi seenaa qabeessa raawwatuu dalagaan itti jiruu fi qabatamaan mul’atutu ragaa dha. ABOn sochii dargaggootaa 2000 irraa eegalee itti jiramu, addatti ammo FDG Sadaasa 9, 2009 irraa eegalee hanga 2014 itti fufe, dabrees Sadaasa 2015 irraa eegalee gara FXG-tti guddifame hunda qajeelchuu, leenjisuu fi hogganuun dirqama qabsoo irra jiru sadarkaa haaraa seensisee jira.
Ummatni keenya, miseensotnii fi deggertootni, akkasumas Qeerroon Bilisummaa hogganummaan ABO ifa akka tahu gaafataa turan illee ABOn nageenya ummata keenyaa fi Qabsoof dursa kennuun haalli aanjaa hanga uumamutti ABOn hidhata hogganummaa Qeerroo waliin qabuu fi sochii FDG-FXG qindeessuu fi hogganuu ibsuu irraa of qusataa har’a gahe. Tarkaanfiin kun ABOn fudhatamuu irraa sochii biyya keessaa hogganummaa ABOn gaggeeffamaa jirutti abbaa itti tahuuf kanneen himachuu hin waakkanne mul’achaa akka turanii fi jiran, akkasumas ABOn hin jiru jechuun hoggana QB-tti of ilaalan mumul’atuun ummata keenya jalaa dhokataa miti.
ABOf kan dursu roorroo, saaminsaa fi cunqursaa gateettii ummata Oromoo irraa buusuun bilisummaa isaa mirkaneessuuf naamusaan hojjicha milkeessuu malee beekamtii matayyaa fi dantaa biraa ittiin guuttatuuf ykn beekamtii maqaa Oromoon argamuun golgamee diinatti araaramuu dhaan cunqursaa fi saaminsa itti fufsiisuu waan hin taaneef, haala aanjaa kan lubbuu ummata keenyaa galaafatuuf sababaa diinni himatu irra aanuuf obsaan haala aanjeffatuu filate.
Har’a sadarkaa qabsoon ummata Oromoo irra gahe eenyuyyuu jalaa dhokataa hin tahu. QBO fincila ummataa dabalatee sadarkaa maayyii gahe kana xumura itti gochuuf ABOn yeroo kamiyyuu caalaa hojjatuu irratti argama. Ummata keenya meesha-maleeyyii balaa irraa ittisuuf, wixxifata diina abdii kutateen tarkaanfii gara jabinaa fudhatamaa jiru irraa baraaruufis ABOn ilmaan Oromoo Waraana mootummaa, humna poolisa federaalaa fi kanneen bifa adda addaan hidhachiifaman waliin hojii hojjataa bahee fi itti jiruun milkiin argamaa jiru akeeka isaa rukutaa jira.
Hojii waraanaa, poolisaa fi hidhattoota biraa waliin hojjatamaa jiru kanaanis ilmaan Oromoo dhumiinsa lammii isaanii irra gahaa jiru arganii fi dhaga’an ABO fi ummata isaanii waliin hiriiruu dhaan garee Fashistootaa maqaa mootummaan hammeenya dorgomaa hin qabne ummatoota irratti raawwataa jiru kana aangoo irraa qaarisiisuuf hidhannoo isaanii waliin QBO-tti makamuu irratti argamu. Ilmaan Oromoo sirna ummata Oromoo hiyyoomsee fi deegse waliin hiriiruun garee faashistootaa kana umrii dheeressuun as irratti haa dhaabbatu jechuun qabsootti makamuun umrii bittaa Wayyaanee/TPLF gabaabsuu keessatti gumaachi qabu ol aanaa akka tahe hin falamsiisu.
Waan taheef ABOn haala biyya keessaa irratti hundaa’uun ummata Oromoo biyya keessaa fi alaaf dhaamsa armaan gadii dabarsa.
Yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo caasaa mootummaa gara garaa keessaa addatti ammoo, waraana mootummaa, poolisaa fi milishaa keessaa gara QBO-tti dabalamaa waan jiraniif caasaan dhaabaa, kan Qeerroo fi ummatni keenya akka simatu ABOn dhaama. Qabeenyaa fi maatii isaanii tarkaanfii diinaa irraa tiksuunis gaafatama keenya tahuu hubatuun eegumsi barbaachisu akka godhamuuf ABOn dabalataan dhaama.
Wayta ammaa kana ummatni Oromoo haalli keessa jiru ulfaataa fakkaatus qarqara bilisummaa irratti argama. Gaaga’amaa fi yaaddoo jiru ammoo kan hanqisu qabsoo dhaloota Oromoo maraa ti. Yeroon qabsoo Oromoo moggaa dhaabbatanii ilaalanii fi dantaa matayyaaf jecha mirga ummata keenyaa dura dhaabbatan miti. Waan taheef, ilmaan Oromoo caasaa mootummaan haammatamtanii dalagaa ummata Oromoo akka sabaatti dhabamsiisuuf murteeffate tajajiiluu irratti bobbaatanii wareegama keessaniin sirna farra ummata Oromoo jiraachisaa jirtan hundi, yeroon dirqama lammummaa keessan itti bahatuu qabdan kan mayii amma waan taheef, akkuma waaheloota keessanii mooraa qabsoo bilisummaatti akka dabalamtan maqaa ummata Oromootiin ABOn waamicha dhumaa kana isiniif dabarsa. Caasaan dhaabaa, Qeerroo Bilisummaa fi ummatni keenyas kana aanjessuu fi simatuuf akka hojjatu hubachiifna.
Ummatni Oromoo rorroo irra gahaa jiru hubatee, mirga isaaf malu beekee wareeegama ulfaataa baaseen qabsoo isaa sadarkaa boodatti hin deebineen gahee jira. Har’a gowwoomsaa fi sossobbaa kamiinuu boodatti hin deebi’u. Mirga bubuutuudhaan gowwoomsuun ni danda’ama jedhanii yaaduunis of gowwoomsuu dha. Waan taheef, gochaan waggoota 25 dabraniif irratti raawwatame dhaabamuu qaba. Mirga akka ummataatti qabu akka gonfatu taasisuu malee dura dhaabbatuun haada ofitti jabeessuu taha. Waan taheef, miseensotni OPDO sadarkaa adda addaa, bulchiinsaa fi dabballummaan sirna farra ummataa waliin hojjachaa jirtan, qalbii keessanitti deebi’uu dhaan akka ummata Oromoo waliin hiriirtan ABOn waamicha Oromummaa maayyii kana isiniif dabarsa. Kanaan booda diina waliin hiriiruu fi diinaaf hojjatuu irraa tarkaanfii ummatni fudhatuun balaa maatii fi qabeenya keessan irra gahuuf gaafatamaan isinuma tahuu ABOn jabeessee hubachiisuu fedha.
Ummatni Oromoo gabrummaatti xumura gochuuf Oromiyaa mara keessatti diina sardaa akka jiru dhokataa miti. Haa tahu malee ilmaan ummataa har’as sababa adda addaan mooraa qabsootti kan hin makamiin ni jiru. Kana waan taheef, ummatni Oromoo ilmaan, firaa fi aantee isaa waraana mootummaa, humna poolisaa fi caasaa OPDO keessatti argaman irratti dhiibbaa gochuun of cinaa hiriirsuu irratti jabinaan akka hojjatu ABOn dhaamsa isaa dabarsa.
Kanneen waamichaa fi gorsa ummataa irra tarkaanfatuu dhaan diina waliin dhaabbatanii ummata Oromoo dhiigsuu itti fufan seeraanis tahe seenaan gaafatamoo tahuu kanuma waliin yaadachiisa.
Ummatni Oromoo ummatoota olla isaa waliin nagaa fi obbolummaan jiraachuun fedhii isaa ti. Ollaan isaa nagaa qabaate malee nagaa guutuu qabaachuu akka hin dandeenye ni hubata. Nagaa ummatoota hundaan barbaadamu kana hariiroo ijaaraa ummatoota gidduutti uumamuu fi diina waloo irratti waliin qabsaa’uun argama. Waan taheef, ummatootni ollaa Oromoo hundi diina waloo irratti waliin haa kaanu jechaa, ilmaanii fi firoottan isaanii mootummaa kufaa jiru kanaan sobamanii fi dirqisiifamanii humna waraanaa, poolisaa fi tika keessatti hiriiruu dhaan ummata Oromoo irraan miidhaa geessisaa jiran gochaa isaanii kana irraa akka dhaabbataniif dhiibbaa barbaachisu akka godhaniif ABOn waamicha obbolummaa dabarsaaf.
Falmaa bilisummaa adeemsifamaa jiru kanaan ummatni Oromoo bakkoota hedduu irraa diina ari’uu danda’ee jira. Naannoo bilisoomse daddaffiin tasgabbeessuu fi nageenya tohatuun ammoo haalaan barbaachisa. Waan taheef, naannoolee dhuunfataman keessattis Koree Bulchiinsaa fi Bilisummaa ijaaruun nageenya naannoo fi ummataa tiksuun qabeenyi ummataa kamiyyuu akka hin saamamnee fi seer-dhablummaan akka hin dhalanne akka taasifamu, haala uumame kanaan dahatanii kan ummatoota gidduutti rakkina uumuu barbaadan ergamtootni diinaa jiraachuu waan malaniif, alagoota Oromiyaa keessa jiraataa turanii fi jiran irratti tarkaanfiin kamiyyuu akka hin fudhatamne akka taasifamu ABOn jabeessee hubachiisa. Kanuma waliin kanneen dhimma dhuunfaa fi haaluu bahuuf jecha qabsoof fakkeessuun tarkaanfii nam-tokkee fi garee irratti fudhatan yoo jiraatan seera ummata Oromoon gaafatamuun waan dhufuuf, akka kun tasa hin dalagamne kanuma waliin yaadachiifna.
Haala yeroo ammaa biyya keessatti mul’ataa jiru ummata keenyaaf ittisa gochuu gaafata. Dirqamni ulfaataan kun ammoo kan ABO fi miseensa qofatti dhiifamu miti. Dirqama lammii hundaa ti. Dirqama ummata keenya ittisuu fi QBO xumuraan gahuufis qabeenya guddaa, sochii siyaasaa fi diplomaasii bal’aa gaafata. Waan taheef ummata keenya ittisuuf ABOn WBO, miseensota Humna Ittisaa Itophiyaa turanii kanneen Qabsootti makaman, Poolisa Federaalaa fi humnoota hidhatoo biroo waliin qindoomina olaanaan dhimma qabsoo hojjataa jiru caalaatti milkeessuuf ummatni keenya ala jiru bifa hundaan akka dirmatuuf ABOn waamicha Oromummaa dabarsa.
← Qilee Ashalamoo, fi Ashuutee!? Bishooftuu, Ashalamoo 2ffaa??
Ethiopia: Independent Inquiry Needed on Irreecha →